Dowladda Sacuudiga Oo Xirtay Wadaado Taageerayaal u Ahaa.
Tuesday September 12, 2017 - 11:15:20 in Wararka by
Xukuumadda Aala Sacuud ayaa wajahaysa khal khal dhanka siyaasadda ah kadib markii ay jeelasha udhaadhicisay tobaneeyo kamid ahaa wadaadada usacaba tumayay maamulkeeda islamarkaana caan ku ahaa dacaayadeynta jamaacaadka jihaadiga ah.
War rasmi ah oo kasoo baxay madaxa amniga dowladda Aala Sacuud ayaa lagu sheegay in gacanta lagu dhigay dad farabadan oo ubasaasayay dowladaha shisheeye islamarkaana khal khal gelinayay ammaanka iyo nabad gelyada sida hadalka loo dhigay.
Culimaa’udiinka caanka ah ee ciidamada ammaanka ay xireen waxaa kamid ah Salmaan Alcowda iyo Cawad Al-qarni oo kamid ah ragga sida aadka ah utaageeri jiray Hoggaamiyaasha sacuudiga.
ilo wareedyo ayaa sheegaya in dadka laxiray ay kamid yihiin saxafiyiin iyo aqoonyahanno 20-kii sanadood ee lasoo dhaafay ku saf ahaa xukuumadda balse hadda kasoo horjeestay.
"Amniga dowladda Sacuudiga ayaa xiray shakhsiyaad gudaha ah oo ubasaasayay danaha dowlado shisheeye” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Aala sacuud.
Siyaasiyiin iyo saxafiyiin dibad joog ah ayaa ku eedeeyay Max’med Bin Salmaan dhaxal sugaha dowladda Sacuudiga in uu adeegsanayo siyaasad khaldan oo beegsanaysa dhammaan dadka wax uun ku khilaafsan xukuumadda.
"Dadka laqabtay waxay ka shaqeynayeen arrimo ka dhan ah amniga,manhajka,masaalixda iyo wada noolaashiyaha bulshada ee Boqortooyada” ayaa lasii raacsiiyay warka sacuudiga kasoo baxay.
Baraha bulshadu ku wada xiriirto ayaa si aad ah looga hadal hayaa xariga Salmaan Alcowdah iyo Ciwad alqarni sidoo kale waxaa laxiray labaatameeyo qof oo dhammaantood soo jeedin in wadahadal lagu dhameeyo khilaafka u dhaxeeya Qadar iyo xulufada ay hoggaaminayaan Imaaraatka iyo Sacuudiga.
Dowladda Sacuudiga ayaa si aad ah uga carootay taageerada ay Qadar ka heysato shacabka ku dhan dhulka Xarameynka arrinkaas oo keenay in ay aamusiso dhammaan hoggaamiyaasha bulshada ka dhax muuqda sida culimada iyo saxafiyiinta.